खुशीको खबर: नेपालमा आज एकैदिन ६६४८ जना को’रोना सं’क्रमित डिस्चार्ज – Sandesh Press
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ६६४८ जना को’रोना संक्रमि’त डिस्चार्ज भएका छन् । योसहित निको हुनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार १०८ जना पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा को’रोना सं’क्रमण भएर नि’को हुनेको दर ७४ . ६ प्रतिशत रहेको बताए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ७३६८ जनामा को’रोनाभाइ रस संक्र’मण पुष्टि भएको छ । पी’सीआर विधिबाट ७ हजार ३१६ र ए’न्टिजेन विधिबाट ५२ जना गरी जम्मा ७ हजार ३६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा २९२, ललितपुरमा ४३६ र काठमाडौंमा १ हजार ८८१ गरी जम्मा २ हजार ६०९ जनामा संक्र’मण पुष्टि भएको गौतमले जानकारी दिए । यस्तै आज संक्रम’णका कारण १४५ जनाको ज्या’न गएको पनि उनले जानकारी दिए ।त्यस्तै चलचित्र लेखक, निर्देश, गीतकार तथा संगीतकार चेतन कार्कीको को’रोना संक्र’मणबाट नि’धन भएको छ ।
उनलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बौद्धिक र हकी स्वभावका चलचित्रकर्मीका रुपमा चिचिनछ ।त्यस्तै नेकपा एमाले इलामका नेता नवराज शंकरको मृ’त्यु भएको छ । उनको शनिवार राति को’रोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृ’त्यु भएको हो । ’कोरोना पुष्टि भएपछि उनी हो’म आ’इसोलेसनमा बस्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्यमा स’मस्या बढेपछि उनलाई मोरङको विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होम लगिएकोमा उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको हो । उनी नेकपा एमालेको कार्या’लय सचिवसँगै विभिन्न सं’घसंस्थामा सक्रिय रहेका थिए । त्यस्तै नेपालगञ्जमा कार्यरत पत्रकार रईश साईको को’रोना सङ्क्र’मणबाट शनिबार मृ’त्यु भएको छ ।
नेपालगञ्जबाट प्रकाशित तथा सञ्चालनमा रहेको खबर नेपालगञ्ज दैनिक र खबर नेपालगञ्ज डटकमका सम्पादकसमेत रहेका साईको शनिबार उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा मृ’त्यु भएको हो । नेपालगञ्ज निवासी स्व साईको शनिबार नै इ’स्लामिक परम्पराअनुसार अ’न्त्ये’ष्टि गरिएको छ ।
दोस्रो भे’रियन्टको को’रोना कहरबाट जो’गिनका लागि पत्रकार महासङ्घ बाँके तथा पत्रकार निकट स’ङ्घसंस्थाले स्वास्थ्यको पूर्ण पालना गर्दै सञ्चार कर्म गर्न आ’ग्रहसमेत गरेका छन् । वैशाख महिनामा मात्र बाँकेमा को’रोना भाइ’रस सङ्क्र’मणका कारण २४२ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
वैशाख महिनामा बाँकेमा उपचारका लागि जिल्ला बाहिरबाट आएका ७५ र जिल्लाकै १६७ जनाको मृ’त्यु भएको जिल्ला को’भिड स’ङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज वलीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सङ्क्र’मणका कारण ज्यान गु’माउने १०१ महिला र १४१ पुरुष हुनुहुन्छ ।
बाँके जिल्लाका मात्र ७३ महिला र ९४ पुरुषको सङ्क्र’मणका कारण मृ’त्यु भएको छ । जिल्लामा करिब चार हजार सक्रिय सङ्क्रमितले विभिन्न संस्थागत तथा हो’म आइसोलेशनमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । करिब तीन हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित होम आ’इसोलेशनमा रहेको जिल्ला को’भिड स’ङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति वलीले बताए ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ च्यानल नेपाल प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष शान्तिराम कार्कीको को’रोना सङ्क्र’मणका कारण ३४ वर्षको अ’ल्पायुमै नि’धन भएको छ । गत वैशाख १९ गते स’ङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सोही दिनदेखि काठमाडौँको स्वयम्भूस्थित मनमोहन मे’मोरियल अस्पतालमा उपचारत कार्कीको स्वास्थ्यमा थप स’मस्या आएपछि वैशाख २३ गतेदेखि भे’न्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेकामा शनिबार साँझ ८ः०० बजे नि’धन भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रो’शन पुरीले वि’ज्ञप्ति जारी गरी स्वर्गीय पत्रकार कार्कीप्रति श्र’द्धाञ्ज’लि अर्पण गर्दै दि’वङ्ग’त आ’त्माको चि’रशा’न्तिको कामना गरेका छन् । को’रोनाकै कारण हालसम्म १३ पत्रकारको नि’धन भएको छ भने ७५० भन्दा बढी पत्रकार स’ङ्क्रमित भएका छन् ।
Prevकाठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि : ‘रोबो भ्यान’ बन्दै